Vaovao - Inona avy ireo firafitra sy fampiasan'ny siny
Inona avy ireo firafitra ara-materialy sy fampiasana ny siny
Ny bucket dia manondro mpikambana miendrika siny ampiasaina mba hakana fitaovana malalaka toy ny tany, fasika mavo, vato ary fako fanamboarana. Izy io dia misy lovia ambany, takelaka rindrina, lovia sofina, lovia sofina, lovia nify, lovia eo anilany, ary nify siny. Izy io dia karazana fitaovana miasa matetika napetraka amin'ny excavator ho an'ny fihadiana. Ny fitaovan'ny siny mihady Congqin dia azo zaraina ho amboara hady, siny fisintomana, siny miompana amin'ny tany, siny vato ary siny mpitrandraka.
Ny siny excavator dia zaraina ho siny mahazatra, siny manamafy, ary siny mpitrandraka arakaraka ny toetra ara-pitaovana.
Ny akora vita amin'ny siny mahazatra dia vita amin'ny vy Q345B mahery avo lenta avo lenta avo lenta. Ny toetoetran'ny siny mahazatra: lehibe kokoa ny velaran'ny vavan'ny siny, ary manana fipetrahana lehibe kokoa izy, noho izany dia manana singa feno kokoa izy; mamonjy fotoana iasana ary mahomby. Mety amin'ny tontolon'ny asa maivana toa ny fitrandrahana ny tanimanga ankapobeny sy ny famoahana fasika, tany ary vatokely.
Ny siny nohamafisina dia vita sy hamafisina amin'ny fitaovana vy tsy mahazaka hery avo lenta ho an'ny adin-tsaina ambony sy ireo faritra marefo amin'ny alàlan'ny siny mahazatra; ny ampahany marefo amin'ny lozan'ny seza nify sy ny lovia eo anilany dia vita amin'ny akora matanjaka manana akanjo matanjaka avo lenta ao an-trano Steel NM360, takelaka matevina, fiainana fanompoana maharitra. Mandova ny tombony rehetra amin'ny siny mahazatra ary manatsara be ny tanjaka sy ny fanoherana azo. Ny tontolo azo ampiharina dia asa mavesatra toy ny fitrandrahana ny tany mafy, vatokely, fametahana vatokely sns.
Ampitomboy ny lovia fanamafisana eo ambanin'ny siny fitrandrahana; ampitomboy ny takelaka mpiambina; apetraho ny takelaka miaro, raiso ny famolavolana arofanina roa eo ambanin'ny siny mba hampitombo ny fahazoana ny tany amin'ny voditongotra ary hampihena ny akanjo; ny banga azo ovaina amin'ny fifandraisana amin'ny tehina Fitaovana; Ampiasao ny vy soedoa tsy mahazaka hery mahery vaika soedoà HARDOX, izay maharitra ela ny fiainana ny vokatra; ny nify siny dia nify siny manokana ho an'ny vato. Ataovy azo itokisana kokoa ny vokatra, fahombiazan'ny fitrandrahana tsara kokoa ary ara-toekarena kokoa. Tontolo iainana azo ampiharina: Fitrandrahana vato mafy, vatosoa ambanin'ny tany ary vato mifangaroharo mifangaro amin'ny tany; fandidiana mavesatra toa ny fametahana vatolampy mafy sy akora voavely.